ရိုမန်းတစ်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးဓာတ်ပုံများ၏အများဆုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကြင်နာဖြစ်ပါတယ်။ ကအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့အာရုံနှင့်တံဆိပ်ခတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကဒီမှာဖြစ်သကဲ့သို့တိုင်းမိန်းကလေးသို့မဟုတ်အကြီးအ trepidation နှင့်အတူချစ်သူများတရံဒါရင်ခုန်စရာနှင့်က Shared ရိုက်ချက်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါစိတ်ရင်းနှင့်စင်ကြယ်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်အရေးကြီးသောအချက်များလည်းခက်ကိုကြည့်, ဒါမှမဟုတ်မကစားခဲ့ဘူးသတိရပေးပါ။
သင်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာသွားခင်မှာ နှစ်ယောက်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူး , သငျသညျ, လက်ျာကျားကန်ကိုရှေးခယျြဂရုတစိုက်ကိုယ်ဟန်အနေအထားစဉ်းစားပါ, အဝတ်အစား, ဒုတိယတစ်ဝက်များ၏ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာယေဘုယျအစီအစဉ်ပစ်ခတ်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အလွန်အရေးကြီးသောအချက် - ဤသူသည်သင်တို့အစားတစုံတယောက်သောသူသည်အရာ၏အဆင်မပြေသို့မဟုတ်အဆင်မပြေထက်, မေတ္တာနှင့်စောင့်ရှောက်မှုကိုပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပုံထဲမှာရှိသကဲ့သို့အဝတျအစားမြား၏နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေသည်။
သဘာဝအတွက်ရင်ခုန်စရာဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးဘို့ရာအရပျကိုကြိုတင်ရွေးချယ်တော်မူရပါမည်: ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်စစ်ဆေးနှင့် Pre-ရွေးချယ်ထားသောတည်နေရာကိုသွားပါ, သင်ပင်နောက်ခံနှင့်အတူအနည်းငယ်စမ်းသပ်ရိုက်ချက်များစေနိုင်သည်။ ရာသီဥတုအေးမြသည်မှန်လျှင်, ရိုက်ကူးရေးများအတွက်စုံလင်သောကျားကန်တစ်ဦးနွေးစောင်သို့မဟုတ် bract ဖြစ်လိမ့်မည်။
အတွေ့အကြုံရဓာတ်ပုံဆရာသင်အိမ်ကနေဒုက္ခသို့မဟုတ် kazusnuyu အခွအေနသို့ရမယ့်ရင်ခုန်စရာစတိုင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးဘို့ပေါင်းများစွာသောနေရာများမဟုတ်တဦးတည်းမဟုတ်ရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုကြပါတယ်။
သင်လက်ရှိမည်သည့်အားနည်းချက်ကိုတွေ့မြင်လျှင်, ဓာတ်ပုံဆရာနှင့်အတူကဆှေးနှေးဖို့ချီတုံချတုံမကိစ္စတွင်: သူတိုတောင်းသောအရပ်မှလက်ျာဘက်ထောင့်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်, ပါးစပ်တွင်းပြဿနာများကိုသို့မဟုတ်နှစ်ဆမေးစေ့သင်၏ဓါတ်ပုံများလုယူနိုင်ဘူး။
အပြာရောင်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ဂျာကင်အင်္ကျီ khaki ချဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အဝတ်အတွက် Cyclamen အရောင်
Salicylic နံ့သာဆီ - သင်သိသင့်သောလျှောက်ထားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
ကိုယ်အလေးချိန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်တစ်ပတ်မီနူး - buckwheat အစားအစာအပေါ် Pelagia
တိုက်စားမှု bulbit - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး